Nhazi na ọmụmụ ihe bụ saịtị sitere na 2010 nke na-achọ ime ka ndị na-agụ ya mara banyere ihe kachasị ọhụrụ ozi ọma, mgbanwe na oku nke usoro muta. Ihe ka n'ọnụ ọgụgụ n'ime mmegide na isiokwu mahadum na ụlọ akwụkwọ, site na otu esi arụ usoro ọrụ gọọmentị na akụ na ntuziaka maka ụmụ akwụkwọ.
Ihe a niile ga-ekwe omume site na ndị ọrụ nchịkọta akụkọ anyị ị nwere ike ịhụ n'okpuru. Ọ bụrụ n’ịchọrọ isonye n’otu a, ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị ebe a. N'aka nke ọzọ, na nke a Nwere ike ịchọta isiokwu niile anyị kpuchiri na ibe a kemgbe ọtụtụ afọ, ahaziri site na edemede.
Gụsịrị akwụkwọ na Dọkịta nke Nkà Ihe Ọmụma na Mahadum Navarra. Ntụziaka ọkachamara na nkuzi na Escuela D´Arte Formación. Edemede na nkà ihe ọmụma so n’ọrụ aka m. Na ọchịchọ ịnọgide na-amụ, site na nyocha nke isiokwu ọhụrụ, na-eso m kwa ụbọchị.
Mụta anaghị ewere ọnọdụ, kama ọ na - enye gị ohere ịnọ ebe ịchọrọ. N'ihi na ezigbo ọzụzụ ga-emepe ụzọ niile ị chọrọ. Oge agaala tomụ ihe! Maka nke a, na FormaciónyEstudios anyị chọrọ ka ị nwee ike iji ezigbo ihe ọmụma nweta ihe mgbaru ọsọ gị niile.
Anọ m na-enwe mmasị n'ịkụzi ọrụ na nduzi (FOL) na ọrụ m, agara m isiokwu metụtara nke a. Na mgbakwunye, usoro ịmụ akwụkwọ bụ ihe dọọrọ mmasị m, ọkachasị ịkụziri ụmụaka ka ha mụta ihe.
Vintage '84, ịnyịnya ibu na-enweghị ike ịnwe oche na-adịghị mma yana ọtụtụ ihe ụtọ na ihe omume ntụrụndụ. Bụ ihe ọhụụ na ọmụmụ ihe bụ otu n’ime ihe ndị m na-ebute ụzọ: ị naghị akwụsị ịmụ ihe. Want chọrọ ịma ka esi eme ka ọmụmụ ihe gị kawanye mma? N’isiokwu m, ị ga - ahụ ọtụtụ ndụmọdụ m na - atụ anya, ga - enyere gị aka imeziwanye ọzụzụ gị.